ကိုဗစ်ကာလအခက်အခဲတွေ့နေသည့် လူရွှင်တော်များအတွက် နေတိုးက ကျပ် ၁၀ သိန်းလှူ - DVB
ကိုဗစ်ကာလအခက်အခဲတွေ့နေသည့် လူရွှင်တော်များအတွက် နေတိုးက ကျပ် ၁၀ သိန်းလှူ
လတ်တလော ကိုဗစ်-၁၉ အကြပ်အတည်းကာလမှာ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ တွေ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ လူရွှင်တော်တွေအတွက် သရုပ်ဆောင်မင်းသားနေတိုးက ငွေကျပ် ၁၀ သိန်း လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီလှူဒါန်းမှုကိုတော့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် လူရွှင်တော် ဒိန်းဒေါင်ကတဆင့် ပေးအပ် လှူဒါန်းခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဒိန်းဒေါင်ရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ပေါ်မှာ ခုလိုရေးသားပြီး မျှဝေထားခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
“ကိုဒိန်းဒေါင်အဆင်ပြေရဲ့လားတဲ့? ကျနော်ကတော့ အဆင်ပြေပါတယ်… စျေး ရောင်းဆိုက်ကားနင်းကယ်ရီဆွဲနေတဲ့ လူရွှင်တော်တွေ အဆင်မပြေကြဘူး ကိုနေတိုးရေ ဆိုတော့? ကျနော်လှူပေးပါ့မယ်တဲ့… ဆယ်သိန်းမတည်ပြီး လှူလိုက်တယ်ဗျာ… အ ကယ်ဒမီ ကိုနေတိုးတို့ မိသားစုကို သာဓုခေါ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ(သာဓုသာဓုသာဓု)ပါ”
သိပ်မကြာခင်ကမှ အသက် ၃၉ နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ နေတိုးဟာ ရခိုင်တိုင်းရင်း သားအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၉ ခုနှစ်လောက်က စတင်ကာ အနုပညာလော ကထဲ မော်ဒယ်တယောက်အနေနဲ့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်အနုပညာအပြင် ဂီတကိုလည်း ဝါသနာပါသူ နေတိုးဟာ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှာ တေးအဘ်လ်ဘမ်တချပ်ထွက်ရှိခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ မြူးဇစ်ဗွီဒီယိုတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗွီဒီယို ဇာတ်ကားတွေမှာ ဆက်လက်သရုပ်ဆောင်ခွင့် ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး ဗွီဒီယိုကတော့ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ “သုံးပတ်” ဗွီဒီယို ဇာတ်ကားဖြစ်ကာ နောက်ပိုင်း ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ ဒါရိုက်တာ မီးပွားရိုက်ကူးပြီး ဇာဂနာ၊ စိုင်း စိုင်းခမ်းလှိုင်၊ မျိုးစန္ဒီကျော်တို့နဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “မင်္ဂလာပါ”၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ဒါရိုက်တာ ဟိန်းစိုး ရိုက်ကူးပြီး လူမင်း၊ နဝရတ်တို့နဲ့အတူ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ “ပန်းပျိုးသူတို့ အလင်္ကာ”ရုပ်ရှင်တွေကတော့ နေတိုးရဲ့ ရုပ်ရှင်ခြေလှမ်းအစ ဇာတ်ကားတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီးတော့ နေတိုးဟာ ဒါရိုက်တာ မောင်မျိုးမင်း(ရင်တွင်းဖြစ်)စီစဉ်ပြီး သရုပ်ဆောင် ထွန်းထွန်း၊ မိုးမိုး၊ ရဲလေး၊ ကျော်ကျော်ဗိုတို့နဲ့အတူ “ထာဝရနှင်းဆီ” အငြိမ့်မှာ လူရွှင်တော် တယောက်အနေနဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်ကတည်းက လက်ရှိအချိန်ထိ ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတာပါ။
လက်ရှိမှာတော့ နေတိုးဟာ သရုပ်ဆောင်ကြေး အမြင့်ဆုံးရရှိတဲ့ မင်းသားတလက် ဖြစ်နေခဲ့ပြီဖြစ်ကာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွက် “မိုးညအိပ်မက်မြူ”ရုပ်ရှင်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် “နက္ခတ်မှားတဲ့တိုက်ပွဲ”ရုပ်ရှင်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အတွက် “တာတေကြီး”ရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့ အကောင်းဆုံး အမျိုးသားဇာတ်ဆောင်အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆု ၃ ဆု ဆွတ်ခူးရရှိထား ပါတယ်။
နေတိုးဟာ အလှူအတန်းရက်ရောတဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသားတယောက်ဖြစ်ပြီး သိပ်မကြာခင်ကလည်း မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြေခံပြည်သူ အိမ် ထောင်စု ၃၉ စုအတွက် အခြေခံစားသောက်ကုန်တွေ လှူဒါန်းတာတွေ၊ သက်ကြီးလူရွှင် တော်တွေအတွက် ငွေကျပ် ၁၀ သိန်း၊ ဖားကန့်မှာ ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့သူများအတွက် ပရ ဟိတ ဈေးရောင်းပွဲတော်ကို ငွေကျပ် ၁၀ သိန်း၊ ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ညီဖြစ်သူ မင်းသွေး အတွက် ရည်စူးကာ ရခိုင်စစ်ရှောင်တွေအတွက် တဲအိမ် ၁၅ လုံး၊ ခီမောင်နှံပရဟိတ အဖွဲ့က ဦးဆောင်နေတဲ့ ကိုဗစ်ကာလ ချို့တဲ့နွမ်းပါးသူတွေအတွက် Free Cash Program for the Needy (FCPN) ပရဟိတအဖွဲ့ဆီ ငွေကျပ် သိန်း ၃၀ လည်း လှူဒါန်းခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ်။
တကျော့ပြန်ကူးစက်မှုတွေနဲ့ ကိုဗစ်-၁၉ ဒုတိယလှိုင်းကာလမှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံ မှာ ဒီကနေ့ညနေ ၄ နာရီခွဲအထိ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြုလူနာပေါင်း ၆,၉၅၈ ယောက်နဲ့ သေဆုံးသူစုစုပေါင်း ၁၂၉ ယောက် ရှိလာနေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous story မလေးရှား အစိုးရသစ်ဖွဲ့စည်းရန် ထောက်ခံမှုအများစု ရထားဟု အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ပြော
Next story ကမ္ဘာ့ရေးရာတွင် အာဖရိက ပါဝင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရေး နိုင်ဂျီးရီးယား တိုက်တွန်း